Shona - Week 12 - The Zimbabwean
Shona – Week 12
Kudzokera kumadhongi zvekare here<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
class=MsoNormal style=”MARGIN: 0in 0in 0pt”><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />HARARE – Mugore ra1965 kwapera mwedzi mishoma varungu vemuRhodesia vava kuzvitonga (UDI) kwakava nokushushikana vanhu vachifunga kuti Feruka Pipeline iyo yaiwunza mafuta kubva kuBeira ichavharwa nekuda kupfidzisa Smith.
Gore rino, kwatove nemakore makumi mana apfuura madhongi ave kukwidza mipata yemakomo ekwaMutare akatakura mafuta anokosha aya.
Hatingati hedu hupfumi hwenyika hwave kutemba nemadhongi, asi tingati kushandiswa kwemadhongi koratidza pasvika nyika mukudzikira.
Ukayenda pamataundishipi ekumaruwa mazuva ano unowana paine vanhu vanogadzira zvakasiyana-siyana, kubvira mapadza nemiromo yemagejo kusvikira kungoro nematafura. Vanenge vachishandisa michina yavanogadzira vega uye vachitopinza vanhu mabasa. Vamwe vanogadzira shangu nemabhegi echikoro kana ekutengesera kuzvitoro zvemaKura.
Kana paine zvokushandisa vanhu vanogona kuzviitira zvinhu vachisimukira mukugadzira vachishandisa njere dzavo. Mabasa aya akatotsiga kudarika maindasitiri anogadzira matarakita, chero zvavo achiratidzika seepasi.
Asi chinoshamisa ndechekuti izvi zviri kuitika mukati mekuwana kwavo, zvakafanana nezviri kuitika mumatongerwo enyika. Mumaruwa vanhu vava kutangisa kuwona zvavangaite kuzvibatsira, sezvikwata zvemadzimai, kana mabheriya (burial societies). Vanhu vavekuwona zvavanogona kuzviitira zvisina hurumende kana vamwe vabatsiri vekunze mukati.
Zvenyaya dzezvekuzvitonga kuzere havasisinei nazvo. Vanhu vakazotanga kuchangangamuka kwapera makore akati kuti vava kuzvitonga.
Vechitendero mazuva ano vari panguva yekuzvinyima zvimwe zvinhu (Lent). Izvi zvakada kufanana nepatasvika muZimbabwe maererano nenyaya dzehupfumi. Kwava nekudzikira kwetarisiro uye vanhu vanowona sepasina chimuko mune zvavari kuita. Asi kana tikararama mune ino nguva tine tarisiro yekuzogara zvakanaka ,chero zvazvo zvichireva kumbodzokera kumashure zvinhano zviviri- ndiko kugadzirira kuzosumukira mangwana. Musakanganwe kuti Mambo Jesu vakapinda muJerusarema vakatasva dhongi! – naNgomakurira
Simba rinobva muruzivo
LONDON – Tinovimba kuti muri kunakidzwa nekuverenga bepanhau renyu mururimi rwaamai. Kuva neruzivo kuva nesimba ndosaka hurumende yaMugabe iri kuramba kutipa kodzero dzedu dzekutaura zvaunoda nekuwana ruzivo rwezvaunoda pasina anokurambidza.
Svondo rino tawedzera mapeji edu enhau mururimi rwaamai kuita masere kuti muwanewo mukana wokuwana nhau sezvadziri.
Tinokukurudzirai kuti muudzewo vamwe nezvebepanhau iri nekuvapawo kuti vaverenge. Fambisai basa!
Hurongwa uhu ndehwemwedzi mitatu yekuwongorora kuti munorionawo sei bepanhau iri. Kuenderera mberi kwacho kuchabva mune zvamunenge matiudza.
Nokudaro tipeiwo zvamunofunga nezvebepa renyu iri. Tumirai maemail ku: [email protected] kama tsamba ku: The Zimbabwean, c/o P O Box 6560, Harare, Zimbabwe or c/o P O Box 61113 Marshall Town 2107, South Africa. – Mupepeti
VeDaily News voda rizinisi ravo
HARARE – Vekambani yeANZ, iyo yaibuditsa bepanhau reDaily News vodzokera kudare reHigh Court uko kwavari kukumbira dare kuti ripe mutongo wokuti Gurukota Rezvekubuditswa Kwemashoko rimanikidzwe kupaANZ rizinisi rekubuditsa bepanhau rayo.
Mukuru wekambani iyi, vaSam Sipepa Nkomo, vakati vakange vambokumbira kusangana negurukota iri, vaTichaona Jokonya, as hapana akavapa mhinduro.
“Nokudaro tavakutoenda kudare reHigh Court, nokuti tavekuda kuti nyaya iyi ichipera.”
ANZ yakanyimwa rizinisi yayo, izvo zvakazokonzera kuvharwa kwepepanhau ravo, asi dare rakati kuvharwa uku kwakange kusiri pamutemo.
Vacheri vegoridhe vosungwa kuMazowe
MAZOWE – Mapurisa azotangisa chirongwa chekusunga vacheri vegoridhe zvisiri pamutemo kuMazowe, asi zvatora makore akawanda nekuparadzika kweivhu kwakawanda.
Mapurisa akasunga vanhu vanokwana makumi masere nevashanu, ndokuwanawo goridhe risati rapepetwa raisvika uremu hwe40kg nezvimwe zvimuchina zvaishandiswa mubasa rekuchera goridhe.
Mutauri wemapurisa Chief Superintendent Mbeko Kunene akati chirongwa chekusunga ichi chicharamba chichienderera mberi.
Avo vanosungwa kekutanga vacharipisiwa mafaindi asi varikusungwa rwepiri zvichienda vachaendeswa kumatare edzimhosva.
Bato rinotonga reZanu (PF) raimbokurudzira kucherwa kwegoridhe zvisisi pamutemo richiti mutemo wacho wakange uchidzvinyirira vatema, avo vaifanirwa kupfumawo nezvicherwa zvemunyika.
Vamwe vaipfuma nekucheriwa kweghoride zvisiri pamutemo ndiwo vakuru-vakuru vemusangano wacho avo vaiwana mukana wokupinda munyaya yacho vasingatyi nokuziva kuti havaizosungwa. Goridhe rinotengwa nemutengo uri pamusoro.
Hurumende yotanga kupemha chikafu zvekare
HARARE – Hurumende, iyo yaimboramba kwemakore kupemha chikafu chekupa vanoshaya, yazotanga kukumbira rubatsito kunyika dzepasi rose.
Ve United Nations vakatowana mamiriyoni matatu emadhora eku America achasevenzeswa kutenga chibhwhe chichatumirwa kuZimbabwe.. Vamwewo vedzimwe nyika vakavimbisa kutumira mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerika munguva inotevera.
Makore apfuura mutungamiri wenyika vaMugabe vaipikisana nevenyika dzepasi rose avo vaida kubatsira nechikafu, vachiti Zimbabwe yaiva nechikafu chinokwana vanhu vose.
Vakatombobuditsiwa mumapepanhau vachiti Zimbabwe yaiva nechikafu chakakwana zvokuti vekunze ava vaida kuti vemuZimbabwe vadzipwe nekuwandisa kwechikafu chavaida kuipa. “Ngavape vamwe vanotambura, kwete isu,” vakadaro vaMugabe.
Asi kwapera makore matanhatu kuine nzara muvanhu vakawanda zvokui vanhu vavakutarisirwa kufa vaine makore makumi matatu nemanomwe chete, asi kare vanhu vaimbotarisirwa kurarama makore makumi matanhatu nemashanu.
Bato ravo, iro rinotonga zvehudzvinyiriri, Zanu (PF), harichakwanisi kana kupa vanoritevera chikafu, kuzoti vanhuwo zvavo. Nyangwe zvazvo mvura yakanaya zvakanakisisa mwaka uno, mapato anoona nezvekubatsira vanhu anoti kana rubatsiro rwechikafu rukasauya rwakawanda vanhu vazhinji vachafa nenzara.
Kushaikwa kwembesa, mafeteraiza acho, kana nemombe dzekurimisa, zvichisangana nekushaikwa kwehunyanzvi nevapi vemazano ekurima zvakonzera kuti Zimbabwe ibve pahushasha panyaya dzechikafu kuenda pahupemhi wekupedzisira.
Nyangwe zvazvo kwakatengwa mazana masere ezvuru (800 000) zvematani echibage mugore rapera, kugoverwa kwechikafu kuvanhu vanenzara nekuvagayisi vacho kwadzikira, nyanye-nyanye kuchamhembe kwenyika.
VeUN vakaona kuti munhu mumwe pavanhu vana muZimbabwe arikuda rubatsiro rwechikafu.
Mawuto haachina kugadzikana
HARARE – Kusagutsikana pakati pevemumawuto kuri kuramba kuchienda mberi, zvichisanganisira nemashoko akabuda okuti masoja epamuzinda mukuru we2Brigade akapiringisha motokari dzawo mukuratidzira kutsutsumwa kwavo nemubairo wavo wokushanda.
Masoja aya anonzi akabvisa mabhatiri kubva mudzimorokari nemabhazi avo ayo atengwa kuChina.
Masoja nemapurisa vasina nyembe vakawona kuti mari yavo yekutambira haina chaichatenga nekukwira kwezvinhu, asi vakuru-vakuru vavo vanopiwa mugove unofashukira mukugova kwehuori kuri kuitwa nehurumende yavaMugabe. Vazhinji vavo vakapiwa motokari mbiri, dzimba, nemapurazi.
Huwori huri muhurumende hwaita kuti vakwanise kugara zvakanaka chaizvo, vamwe vavo vachiwanawo mugove wavo kubva kuzvicherwa zvekuDemocratic Republic of Congo (DRC), uko kwakafira mawuto eZimbabwe akawanda.
……Asi zvokubuda basa zvichirambidzwa
BULAWAYO – Masoja nemapurisa ose asati apedza makore gumi avekurambidziwa kubuda basa nokuti hurumende yavekurasikirwa nevakawanda varikutiza mari shoma nekushanda kusina tsarukano.
Vakatoudziwa kuti havasi kubvumirwa kubuda basa. Zvuru zvitatu zvavo zvinonzi zvakabuda pamwedzi miviri yapfuura.
Mukuru wemapurisa ose munyika, Police Commissioner, Augustine Chihuri, anonzi akanyora gwaro kuvatevedzeri vake avo vari kumapurovinzi ose achiti hapana anobvumirwa kubuda asati apedza makore gumi.
Chihuri akati zvekare vatevedzeri vake vanofanirwa kuwongorora zvikonzero zvirikupiwa neavo varikuda kubuda, vachiwona kuti kana vachipa chikonzero chekuti vanoda kuenda kuchikoro, ngavatange vabuditsa tsamba dzinoratidza kuti vakawana zvimbo dzacho.
Mamwe mapurisa nemasoja vakakumbira zororo vachiti vaizodzoka, asi pavakangosvika kunyika dzakaita seBritain vakabva vawana mabasa epasi zvawo asi aivabhadhara zvinogutsa, vakabva varamba kudzoka.
Musoja kana mupurisa anotangwa neZ$9 million iyo isingambokwani, chero ikapetwa katatu pamari yakataurwa neveCentral Statistical Office kuti ndiyo inodiwa kugutsa mhuri inavana vana nababa namai.
Mugore rakapera Chihuri akamboyambira hurumende kuti kusagutsikana kuri kuwanda mumapurisa, izvo zvaizoita kuti kuchengetedzwa kwenyika kusamira zvakanaka.